चिलकाे नजर शिकारमा, गिद्धकाे नजर सिनाेमा – ABC KHABAR
January 17, 2019 January 17, 2019 ABC Desk बिचार, समाज
गिद्धजातिहरू : कसरी ?
नेपालमा सत्ताधारी पार्टीले चुनावमा धेरैमा २५/३० लाख भाेट ल्याएर शासन गर्छन् ।
मगर, थारू, तामाङ, गुरूङ र राईहरू लाखाैंका संख्यामा टुँडीखेलमा भेला भएर माघी, लाेसार र साकेला मनाउँछन् । याे जमातमा चेतनाकाे राजनीतिकरण हुने हाे भने ओलीहरूले धान्न सक्छन् ?
पिछडिएका जातिहरू मध्य मगरकाे जनसंख्या कम्तिमा १८ लाख छन् । काठमाडाै वरपरका तामाङकाे जनसंख्या कम्तिमा १५ लाख छन् । थारूकाे कम्तिमा १४ लाख छन् । अरूलाई छाडेर यी मात्र तीन जातिकाे जनसंख्या जाेड्ने हाे भने ४७ लाख हुन्छन् ।
यी मगर, थारू, तामाङ, गुरूङ र राईहरू लाखाैंका संख्यामा टुँडीखेलमा भेला भएर माघी, लाेसार र साकेला मनाउँछन् । याे जमातमा चेतनाकाे राजनीतिकरण हुने हाे भने ओलीहरूले धान्न सक्छन् ? ४७ सालमा ५०/६० हजार नेवार जमातले पन्चायत फ्याकेका थिए । ६२/६३ मा लगभग १लाख जनताले राजा फ्याँकेका थिए । धेरै हाेइन, ३ लाख आदिवासीहरूले सिहदरवार घेर्ने हाे भने के हुन्छ ?
चील र गिद्ध आखिर आकासमा नै उड्ने जीव हुन् । चिलकाे नजर तल शिकारमा पर्छ तर गिद्धकाे नजर सिनाेमा पर्छ । ओली-दाहालहरूकाे नजर त्यही परतिर अधिकार र सत्ता हुने सिहदरवारमा पर्छन् तर यी आदिवासीहरूकाे नजर नाचगान हुने टुडिखेलमा पर्छ ।
यी जातिहरू भाैतारिने कस्तुरी त हुँदै हाे, त्यसमाथि पनि यिनीहरू थप गिद्ध हुन् ।
Tagged बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ